Tiava: Didy Vaovao – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 1, 2012 septembre 1, 2012 Laisser un commentaire sur Tiava: Didy Vaovao
« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » Jaona 13:34
Ny Teny tonga nofo dia marika fa Andriamanitra mihitsy no nanetry tena ho eo anivontsika. Tamin’ny Solomona nanorina ny trano ho an’i Jehovah dia niteny hoe, Andriamanitra va hianao ka honina ety antany tokoa? Honina amin’ny trano nataontanan’olona va Izy? Nahagaga anefa fa na dia tranon’omby aza dia nekeny hitoerana! Tao Ilay Jesosy Kristy no teraka! Fanetrentena no mbola hanekeny hiditra ao anatin’
ny fontsika feno loto, ekeo kosa ary ny hanadiovany ny loto ao. Inona ary hoy isika no loto ao ampontsika?
Izay rehetra tsy avy amin’ny Fitiavana dia loto avokoa.
Izay rehetra tsy avy amin’i Jesosy dia loto avy amin’i Satana.
Noho ny Fitiavan’Andriamanitra antsika dia mbola nomeny ny lalàna isika ho arofanina tsy hampianjera antsika.Amin’ny maha nofo antsika dia tsy haintsika izay tena tian’Andriamanitra ataontsika, fa ny lalàna no mampahafantatra antsika ny Sitrapony.
Izao anefa no manahirana: raha eo anoloantsika ny didy folo, dia miezaka araka izay tratra isika manaraka izany: zavadehibe eo anatrehan’Andriamanitra tokoa izany ezaka izany. Fa ny olana dia izao: tsy vitantsika miaraka izy rehetra. Raha diso amin’ny iray loha anefa isika dia diso amin’izy rehetra. Ny olana iray hafa koa dia izao. Raha mba mahatanteraka didy iray ny olombelona dia voasintona hirehareha ka hanamavo ny hafa tsy
mahatanteraka. Ny fireharehana dia fanamavoana ny asan’Andriamanitra.
EO no idiran’ny Fitiavana: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, sy ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra. Ny fanatanterahantsika didy iray dia tokony ho ny Fitiavana an’Andriamanitra izay mpamorona antsika no anaovana izany.
Tsy hafaka ny hirehareha ny kristiana satria misy ny diso, na didy tsy voaaraka. hoy i Paoly hoe tsy ny tsara izay sitrako no tanterako fa ny ratsy izay tsy sitrako. Fanetrentena nasehon’i Paoly apostoly no azo andraisana izany. Tsy hafaka ny hirehareha isika satria tsy tanteraka.
Ny tsara indrindra azontsika atao dia ny Fitiavana:
-Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao.
-Tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
Tanteraka amin’ireo didy roa ireo ny didy rehetra.
Ny fitiavana tsy mirehareha!
Ny Fitiavana manarona fahotana maro…
Finoana, Fanantenana, Fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe in-dindra…
Raha azo atao sary ireo didy roa mahafehy ny didy rehetra ireo dia sary toa izao: -Fitiavana an’Andriamanitra dia ilay hazo mijadona manambara ny fampiraisina ny olona amin’Andria-manitra. Jesosy no nahavita an’io!
-Fitiavana ny namana dia ilay hazo mitsivalana manambara ny fampiraisana ny olona samy olona. Jesosy no nahavita an’io!
Tsy vitan’ny ezaka nataontsika samirery io!
Andriamanitra mihitsy no nanao ny ezaka!
Ny adidintsika dia ny mandray izany!
Mila mitandrina isika sao diso làlana.
Aoka isika hipetraka amin’ny toerana sahaza antsika, dia ny toeran’ny olona noforonina, ary toerana fandraisana ny Fitiavana efa natao, dia ny fandraisana an’Jesosy Kristy Izay efa nitiantsika talohan’ny nahafantaran-
tsika Azy, satria mboa tsy ary akory isika dia efa nanolotra ny ainy Izy, nadatsaka ny ràny Izy hanamarinana antsika!
Nentin’i Jesosy ny Fampihavanana antsika amin’Andriamanitra, amin’ny olona, koa rehefa nandray izany isika dia mba omeny anjara amin’ny fitondrana izany koa ho an’ny hafa.
Jesosy hampahery antsika!
Publié parfilazantsaramada septembre 1, 2012 septembre 1, 2012 Publié dansUncategorized
Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotany.